အမေးများသောမေးခွန်းများ - YTpals
YTpals သို့သင်ရောက်သောအခါထိပ်ပိုင်းခေါင်းစီးမီနူးရှိ“ Login / Register” link ကိုနှိပ်ပါ။
သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်သင်၏ Google များ (YouTube) အကောင့်သို့ log ရန်လိုအပ်သည်။ သင်သည်သင်၏အကောင့်ထဲသို့ log ပြီးတာနဲ့ရိုးရိုးလေး app ကိုခွင့်ပြုချက်ကိုလက်ခံနှင့်သင်သည်သင်၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးရဲ့ပေါ်တယ်မှညွှန်ကြားပါလိမ့်မည်။
ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ - ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ဝင်ခွင့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမရရှိပါသို့မဟုတ်သင်၏ YouTube အကောင့်ကိုမည်သည့်နည်းနှင့်မျှဝင်ရောက်ခွင့်မရှိပါ။ သင်၏အကောင့်သည် YTpals နှင့်အခြားပါတီမှ ၀ င်ရောက်မှုကိုစိုးရိမ်စရာမလိုဘဲ YTpals ကိုလုံခြုံစွာအသုံးပြုနိုင်သည်။
သင်သည်အသင်း ၀ င်၏ပေါ်တယ်တွင်ရှိလျှင် Basic, Starter (Most Popular), Enterprise နှင့် Celebrity တို့ပါ ၀ င်သော YTpals အစီအစဉ် ၄ ခုကိုသင့်အားတင်ပြသည်။ သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ သင်သည်အခမဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုသို့မဟုတ်လစဉ်ကြေးအနည်းငယ်သာရယူရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်းခံရနိုင်သည်။ လုပ်ငန်းသို့မဟုတ်အနုပညာရှင်ကဲ့သို့သောငွေပေးချေသည့်အစီအစဉ်နှင့်အတူသွားပါ။
YTpals သည်အသင်းဝင် ၃၀၀,၀၀၀ ကျော်ကျော်၏လုံခြုံစိတ်ချရသော ၀ န်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။ သင်၏ privacy နှင့်လုံခြုံမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ # 300,000 ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်ပြင်းထန်သော coding ကိုတီထွင်ခဲ့ပြီး ၂၅၆-bit encryption ကို အသုံးပြု၍ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုလုံခြုံစွာကာကွယ်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်၏အကောင့်ဝင်ပါအချက်အလက်ကို YTpals တွင်သိမ်းထားပါသလား။
NO! ငါတို့သည်သင်တို့၏ YouTube ကို / က Google ရဲ့ login information ကိုမဆိုရယူကြဘူးနဲ့ကွန်ယက်စနစ်တကျသင်တို့ဆီသို့ subscriber များအားကယ်မနှုတ်နိုင်နိုင်အောင်သာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာဘေ့စအတွင်းပိုင်းကိုသင့်ချန်နယ်အမည်, ရုပ်သံလိုင်း URL ကိုနဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပြီးအဘယ်အရာကိုမျှ!
“ Activate” ခလုတ်ကိုသင်နှိပ်သောအခါအခြားလမ်းကြောင်း ၁၀ ခုနှင့်ဗီဒီယို ၁၀ ခုကဲ့သို့စာရင်းသွင်းရန်လိုအပ်သည့်စာမျက်နှာသို့သင်ရောက်သွားလိမ့်မည်။ အစိမ်းရောင်“ Activate” ခလုတ်ကိုသင်နှိပ်ပြီးနောက်အစီအစဉ်ကိုအောင်မြင်စွာသက်ဝင်စေရန်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိညွှန်ကြားချက်များကိုသေချာစွာလိုက်နာပါ။
သင်ကြိုက်နှစ်သက်နှင့် / သို့မဟုတ်တစ်ချန်နယ်တွင်စာရင်းသွင်းဖို့ကြိုးစားနေမဆိုပြဿနာများကိုတွေ့ကြုံခံစားလျှင်, အဝါရောင်ချန်နယ်အသစ်တစ်ခုဖော်ပြရန် button ကို "Skip" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ သငျသညျကိုအောင်မြင်စွာလိုင်းများ 10 ပေးသွင်းပြီးနှင့် 10 ဗီဒီယိုများကြိုက်ခဲ့သည်သောအခါ, အခြေခံအစီအစဉ်ကို activated မည်ဖြစ်ပြီးသင်5နာရီ activation ကာလအတွင်း 24 subscriber များအားလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
ဤစနစ်အသစ်သည်အလွန်ထိရောက်ပြီး ၂၄ နာရီအမှတ်အသားမတိုင်မီ၊ သင်ခလုတ်ကိုပြန်လည်အသက်သွင်းခြင်းမပြုမီသုံးစွဲသူ ၅ ယောက်စလုံးကိုသင့်ဆီသို့ပြန်ပို့ပေးလိမ့်မည်။ သို့သော်လူအချို့သည်သင့်ထံမှစာကိုဖျက်သိမ်းခြင်းကိုခံရမည်၊ တစ် ဦး ချင်းစီ activation ကာလအတွင်း5စာရင်းသွင်းသူ။ YTpals မှရရှိသောအခြားအသုံးပြုသူများထံမှစာရင်းပေးသွင်းသူကိုအလိုအလျောက်ပိတ်ပင်ထားသည်။
Basic Plan တွင်အဓိကအကန့်အသတ် (၂) ခုရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်၎င်းကို ၂၄ နာရီတိုင်းတစ်ကြိမ်သာအသုံးပြုခွင့်ပေးပြီးသင်၏အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်အသက်သွင်းရန် YTpals သို့အချိန်တိုင်းဝင်ရောက်ရမည်။ ဆိုလိုသည်မှာ“ Activate” ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးနောက်၊ “ Activate” ခလုတ်ကိုနောက်ထပ် ၂၄ နာရီအတိအကျထပ်မံ နှိပ်၍ မရပါ။ ၂၄ နာရီအချိန်ကုန်လွန်ပြီးနောက်“ Activate” ခလုတ်ကိုထပ်မံ နှိပ်၍ ရသောအခါ၊ အလိုအလျောက်အီးမေးလ်အသိပေးချက်ကိုသင်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
အခမဲ့အစီအစဉ်အသေးစိတ်ကို (Starter အစီအစဉ်)
သင်ကြိုက်နှစ်သက်နှင့် / သို့မဟုတ်တစ်ချန်နယ်တွင်စာရင်းသွင်းဖို့ကြိုးစားနေမဆိုပြဿနာများကိုတွေ့ကြုံခံစားလျှင်, အဝါရောင်ချန်နယ်အသစ်တစ်ခုဖော်ပြရန် button ကို "Skip" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ သင်သည်ရုပ်သံလိုင်း ၂၀ ကိုအောင်မြင်စွာစာရင်းသွင်းပြီးဗီဒီယို ၂၀ ကိုနှစ်သက်ပြီးပြီဆိုရင်၊ စတားအစီအစဉ်ကိုစတင်ပြီး ၁၂ နာရီ activation ကာလအတွင်းမှာသင်မှာယူသူ ၁၀ ဦး ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ဤစနစ်အသစ်သည်အလွန်ထိရောက်ပြီး ၂၄ နာရီအမှတ်အသားမတိုင်မီ၊ သင်ခလုတ်ကိုပြန်လည်အသက်သွင်းခြင်းမပြုမီသုံးစွဲသူ ၅ ယောက်စလုံးကိုသင့်ဆီသို့ပြန်ပို့ပေးလိမ့်မည်။ သို့သော်လူအချို့သည်သင့်ထံမှစာကိုဖျက်သိမ်းခြင်းကိုခံရမည်၊ တစ် ဦး ချင်းစီ activation ကာလအတွင်း 10 စာရင်းသွင်းသူ။ YTpals မှရရှိသောအခြားအသုံးပြုသူများထံမှစာရင်းပေးသွင်းသူကိုအလိုအလျောက်ပိတ်ပင်ထားသည်။
ဤသည် Starter Plan ကိုအခြေခံအစီအစဉ်ကနေနှစ်ခုအဓိကကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးခြားနားချက်သင်ကသက်ဝင်စေနှင့် 10 subscriber များအားတိုင်း 12 နာရီအစားအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှ 24 နာရီလက်ခံရရှိရန်တတ်နိုင်ကြသည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဒုတိယခြားနားချက်အစားအခြားလိုင်းများ 10 ၌စာရင်းပေးသွင်းခြင်း၏, သင် 20 စာရင်းသွင်းရန်ရှိသည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။ 20 အခြားလိုင်းများကိုပြန်စာရင်းပေးသွင်းခြင်းကဤအစီအစဉ်ကိုတိုင်း 12 နာရီ activated ခံရဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မူလတန်းအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။
မည်သည့်အကြောင်းပြချက်ဖြင့်မဆိုချန်နယ်တစ်ခုကိုရယူရန်အခက်အခဲရှိပါကရုပ်သံလိုင်းအသစ်တစ်ခုကိုတင်ရန်အဝါရောင်“ Skip” ခလုတ်ကိုသာနှိပ်ပါ။ ရုပ်သံလိုင်းသစ်ကိုဖွင့်ပြီးတာနဲ့သင်စာရင်းသွင်းရန်ကြိုးစားနိုင်ပြီး၎င်းသည်အလုပ်လုပ်သင့်သည်။
အကယ်၍ ၎င်းအလုပ်မလုပ်ပါက၊ စာမျက်နှာ၏ထိပ်ပိုင်းရှိ“ Login” link ကို နှိပ်၍ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန်သင်ထွက်ခွာသွားသည့်နေရာကိုပြန်လည်စတင်နိုင်သည်။ ဒါကစာမျက်နှာကိုလန်းဆန်းစေပါလိမ့်မယ်။
သင်၏အခမဲ့အစီအစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းရန်လွယ်ကူသည်။ ရိုးရှင်းစွာ YTpals သို့ဝင်ရောက်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။ ကျေးဇူးပြုပြီးသတိရပါ၊ YTpals နှင့်အသုံးပြုစဉ်အတွင်းသင်စာရင်းသွင်းထားသည့်ချန်နယ်များသည်အခြားသုံးစွဲသူများကိုမျှတမှုရှိစေရန်သင်၏အကောင့်ပေါ်တွင်ဆက်လက်ရှိနေသင့်သည်။
စီးပွားရေး၊ Elite နှင့်ကျော်ကြားသောစီမံကိန်းအသေးစိတ် (Paid Plan)
လုပ်ငန်း၊ Elite နှင့် Celebrity အစီအစဉ်များသည်အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးကြောင့်အလွန်ရေပန်းစားသည်။
သင် Enterprise, Elite သို့မဟုတ် Celebrity အစီအစဉ်ကိုစာရင်းသွင်းသည့်အခါတစ်ရက်လျှင် ၁၀၀% အလိုအလျောက်သုံးစွဲသူ ၁၀-၁၅ ဦး၊ စာရင်းသွင်းသူ ၂၀-၃၀ (Elite) သို့မဟုတ်စာရင်းသွင်းသူ ၄၀-၆၀ (Celebrity) ကိုအလိုအလျောက်လက်ခံရရှိသည်။ အချို့သောသုံးစွဲသူများသည်အသင်း ၀ င်မှုတစ်ခုချင်းစီအပြီး၌သင့်အားစာရင်းသွင်းသူ ၇၀-၈၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်နှင့်အတူချန်ထားခဲ့ပါသည်။
အခမဲ့အစီအစဉ်များနှင့်မတူဘဲငွေပေးချေခြင်းအစီအစဉ်များသည် ၁၀၀% အလိုအလျောက်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်လက်မှတ်ထိုးလိုက်သည်နှင့်သင်သည် YTpals သို့ပြန်ရန်လုံးဝမလိုအပ်တော့ပါ။ နေ့တိုင်းသင်စာရင်းပေးသွင်းသူအသစ်များကိုအလိုအလျောက်ပေးမည်ဖြစ်သောကြောင့်သင်၏အကောင့်သည်မလွယ်ကူဘဲလုံခြုံစိတ်ချရသောနှုန်းထားဖြင့်တိုးတက်သည်။
ဤအစီအစဉ်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကောက်ခံနေသည့်စျေးနှုန်းများသည် ၀ ဘ်ဆိုဒ်အများစုသည်ပုံမှန်ကဲ့သို့ပေါ်ထွက်လာသည့်နေ့စဉ်တိုးတက်မှုနှုန်းကိုအစားအားလုံးပေးအပ်သည့်“ အတု” သုံးစွဲသူများအတွက်ကောက်ခံသည့်နှုန်းထက်သိသိသာသာလျော့နည်းသည်။
ငါ Enterprise, Elite သို့မဟုတ် Celebrity အစီအစဉ်ကို activate လုပ်ခဲ့ပေမယ့်ကျွန်တော့်ရဲ့ subscription မတက်ပါဘူး။
အကယ်၍ သင်သည် Enterprise, Elite သို့မဟုတ် Celebrity အစီအစဉ်ကိုအောင်မြင်စွာဝယ်ယူပြီးပါကသင်၏စာရင်းသွင်းမှုသည်မတက်လျှင် ကျေးဇူးပြု၍ ပေးပါ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ ငွေပေးငွေယူသို့မဟုတ်လက်ခံဖြတ်ပိုင်းစာမျက်နှာနှင့်သင့်ရုပ်သံလိုင်း၏ URL ကိုကျွန်ုပ်တို့အားသင်ကူညီရန်လိုအပ်သည့်သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုပေးလိမ့်မည်။
ငါ Enterprise, Elite (သို့) Celebrity အစီအစဉ်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့ ၂၄ နာရီလောက်ကတည်းက activate လုပ်ခဲ့ပြီးအခုအချိန်ထိမှာဘာစာရင်းပေးသွင်းထားသူမှမရသေးဘူး။
သင် Enterprise, Elite သို့မဟုတ် Celebrity အစီအစဉ်ကို ၀ ယ်သောအခါသင်၏ရုပ်သံလိုင်းသည်နာရီအနည်းငယ်အတွင်းကွန်ယက်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်ပြီး ၄ င်း၏အတွင်းပိုင်းတွင် ၂၄ နာရီဆက်နေမည်ဖြစ်ပြီးသင်၏ပထမဆုံးနေ့ရက်ဖြစ်သည်။ ထို ၂၄ နာရီကာလအတွင်းသင်သည်သင်၏တစ်နေ့တာပုံမှန် ၀ န်ဆောင်မှုကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ ထို့နောက်နောက်တစ်နေ့သံသရာသည်ထပ်မံထပ်ခါတလဲလဲလုပ်လိမ့်မည်။ သတိရပါ၊ စာရင်းပေးသွင်းသူများချက်ချင်းမလာကြပါ၊ သို့သော် ၂၄ နာရီအတွင်းတစ်နေ့တာလုံးသို့ပေးပို့သည်။ ၄၈ နာရီအတွင်းမည်သည့်စာရင်းပေးသွင်းသူကိုမဆိုသင်မရရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အားစာတစ်စောင်ပို့ပေးပါ။
အကြှနျုပျ၏ subscriber များအားစာရင်းမှပယ်ဖျက်ဖြစ်ကြသည်။ ဘာဖြစ်နေတာလဲ?
ဤမေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန်, စဉ်းစားရန်အနည်းငယ်အချက်များရှိပါသည်။ ဒီနေရာတွင်သိထားရန်လိုအပ်ကဘာလဲ:
YTpals ၀ န်ဆောင်မှုကိုသင်အသုံးပြုသောအခါနေ့စဉ်ရရှိသောသုံးစွဲသူများ၏ ၇၀-၈၀% ခန့်သည်သင်၏အကောင့်တွင်ရှိနေကြောင်းကိန်းဂဏန်းများကပြသသည်။ ထိုသို့ပြောဆိုခြင်းကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်လျော်ကြေးပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် extras များကိုမကြာခဏပေးလေ့ရှိသည်။
အချို့လူများကစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာခြင်းနှင့်နှုတ်ထွက်ပေမယ့်ပိတ်ပင်ထားခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်အပြစ်ပေးဒီနှင့် YouTube လည်းအလိုအလျှောက်အချို့သော subscriber များအားဖျက်နေကြသည်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့အားလုံးသင့်အကောင့်ပေါ်မှာမတည်မနေပါဘူးအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင်ယူကျု၏နောက်ဆုံးပေါ် algorithms များကပေးပို့လိုက်သည့်ပေးသွင်းသူအချို့ကိုမကြာခဏဖျက်ပစ်သည်။ YouTube ဖျက်ခြင်းပမာဏလျှော့ချရန်၊ သင်သည်ဗွီဒီယိုအသစ်များထုတ်ခြင်းနှင့်သင်၏ဗွီဒီယိုပေါ်တွင်အမြင်များနှင့်ကြိုက်နှစ်သက်မှုများကိုတိုးမြှင့်ခြင်းကိုအာရုံစိုက်သင့်သည်။ အကယ်၍ သင့်တွင်ကြည့်ရှုသူများထက်ကြည့်ရှုသူပိုများပါက၎င်းသည်ဖြစ်ပျက်ရန်အတွက်ယုတ္တိမရှိသောကြောင့် YouTube သည်သုံးစွဲသူများကိုပိုမိုဖျက်လိုဖျက်ဆီးပြုလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ယ်ယူသူအများစုသည် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအလွန် ၀ မ်းသာကြသည်။
သင်သည်စာရင်းသွင်းခြင်းအစီအစဉ်ကို ၀ ယ်ယူပြီး ၀ န်ဆောင်မှုကိုမကျေနပ်လျှင်သင်၏ subscription ပေးငွေပေးချေသည့်နေ့မှသုံးရက်အတွင်း ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ သင်၏စာရင်းပေးသွင်းခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အပြည့်အဝပြန်အမ်းမည်။ သင်၏အသင်းဝင်ကြေးပေးချေမှုပြုလုပ်ပြီးသုံးရက်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်၍ ပြန်အမ်းငွေတောင်းခံပါကကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်သင်၏အကောင့်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဆုံးတွင်အမှားတစ်ခုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကသင်၏အမှာစာကိုအပြည့်အဝပြန်အမ်းမည်၊ သို့မဟုတ်ပမာဏ၏ပမာဏကိုပြန်အမ်းမည်။ လိုင်းအတွက်အသုံးမပြုသောရက်များသို့မဟုတ်သင်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုကို ၀ ယ်ယူပြီး ၇ ရက်အကြာတွင်ဘာမှပြန်မဆပ်ပါနှင့်။
သင် Enterprise, Elite (သို့) Celebrity ကြေးပေးသွင်းခြင်းကို ၀ ယ်သည့်အခါသင်လတိုင်း၏တူညီသောနေ့၌အလိုအလျောက်ငွေတောင်းခံလွှာကိုခံရလိမ့်မည်။ တစ်ချိန်ချိန်တွင်သင်၏ YTpals subscription မလိုအပ်တော့ပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့စာမျက်နှာမှတစ်ဆင့်စာတစ်စောင်ပို့ပေးပါ။ သင်၏လတ်တလောအကောင့်၏ကုန်ဆုံးချိန်တွင်သင်၏အကောင့်ကိုသက်တမ်းကုန်ဆုံးပါမည်။
ဥပမာအားဖြင့်သင်လ 23rd အပေါ်ပေးသွင်းပြီး, ဒါပေမယ့်လာမယ့်လ 10th ပေါ်တွင်သင်၏အကောင့်ပယ်ဖျက်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုရေးလိုက်ပါလျှင်, ငါတို့သည်သင်တို့၏လက်ရှိလရဲ့ subscription ကိုရဲ့အဆုံးမှာ, အကြာတွင် 13 ရက်ပေါင်းဖျက်သိမ်းသင့်အကောင့်ကိုသတ်မှတ်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျချက်ချင်းဖျက်သိမ်းခြင်းပိုနှစ်သက်ကြပါလျှင်, ရိုးရိုးကျွန်တော်တို့ကိုအသိပေးနှင့်ငါတို့ကဲ့သို့ကောင်းစွာသင်တို့အဘို့အကြောင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။
သင်အချိန်မဆိုကာလအတွက်ပေးသွင်းပြီးအဖြစ်သာကျန်ရှိနေသေးကြောင်းပေးရနျတာဝနျရှိကြသည်မဟုတ်, ဒါပေမယ့်သင်က cancel ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်သည့်အခါကျွန်တော်တို့ကိုရေးသားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ထို့နောက်သူကကိုင်တွယ်နှငျ့သငျအတည်ပြုချက်တစ်ခု Message ပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ့် 1 လများအတွက်ပေးဆောင်ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်နိုင်သလား?
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုပေးငွေပေးချေမှုစနစ်ကို အသုံးပြု၍ ငွေပေးချေသည့်အစီအစဉ်ကိုသင် activate လုပ်နိုင်ပြီးမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသင်၏အစီအစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။ သင်ငွေပေးချေပြီးသောအစီအစဉ်အတွက်သင်စာရင်းသွင်းပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့ထံအီးမေးလ်ပို့ပေးပါ။ နောက်တစ်လအကြာတွင်သင့်အကောင့်ကိုအဆုံးသတ်ပါမည်။
အကြွေးဝယ်ကဒ်မရှိပါ။ ပြဿနာမရှိပါဘူး။ လက်ဆောင်ကဒ်ပြားဖြင့်ငွေပေးချေပါ။
လက်ဆောင်ကဒ်များကို အသုံးပြု၍ သင်၏လုပ်ငန်း၊ Elite သို့မဟုတ် Celebrity အစီအစဉ်များကို ၀ ယ်ယူနိုင်ပါပြီ။
Openbucks အသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ "လက်ဆောင်ပေးမယ်ကဒ်များနှင့်အတူငွေပေးချေ"
အဆင်ပြေလက်ဆောင်ကဒ်ထဲသို့သင်၏ငွေကိုထည့်ရန်နေရာ +150,000 ။
ကြေး- ပြန်ဖွင့်ခြင်း၊ လက်ဆောင်ကဒ်ပေါ်တွင်သင်၏ငွေသာဖြစ်သည်။
SAFEလက်ဆောင်ကဒ်ဖြင့်ငွေပေးရန်သင်မှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ / ဘဏ်အချက်အလက်များကိုပေးရန်မလိုပါ။
လွယ်ကူလက်ဆောင်ကဒ်များကို Desktop၊ Tablet နှင့် mobile တို့တွင်ဝယ်ယူပါ။
CVS / Pharmacy၊ Dollar General သို့မဟုတ် oBucks ထံမှလက်ဆောင်ကဒ်တစ်ခုဝယ်ယူပါ။ သင်၏အနီးဆုံးလက်လီအရောင်းဆိုင်တည်နေရာကိုသင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုပေါ်တွင်သင်၏စာပို့နံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်။ စစ်ဆေးနိုင်သည်။
သင်၏ YTpals အကောင့်သို့ ဝင်ရောက်၍ အဆင့်မြှင့်တင်ရန်“ Enterprise”,“ Elite” သို့မဟုတ်“ Celebrity” တစ်ခုခုကိုရွေးချယ်ပါ။
ကုန်ပစ္စည်းတွင်“ Gift With Gift Card” ကိုရွေးချယ်ပြီးသင့်လက်ဆောင်ကဒ်အချက်အလက်ကိုတောင်းပါကထည့်ပါ။